🥇 ukubalwa kwezimali kwabasebenzi
Isilinganiso: 4.9. Inani lezinhlangano: 732
ukubalwa kwezimali kwabasebenzi
Ividiyo yokubalwa kwezimali kwabasebenzi
Oda ukubalwa kwezimali kwabasebenzi
Ukubalwa kwezimali zabasebenzi kufanele kwenziwe ngaphandle kokuhluleka kusetshenziswa usizo lwabasebenzi bethu abenze uhlelo lwe-USU Software system. Okwezimali ezenziwa ngabasebenzi, kufanele ufundisise ngokucophelela ukusebenza okukhona kwesisekelo se-USU Software accounting, ekuthuthukisweni kokubalwa kwemali okusiza inguqulo yethu yesilingo, okuyisistimu yamahhala futhi elula ngokuya ngamakhono ayo. Ekubalweni kwesisebenzi ngasinye, ukusebenza okwengeziwe kohlelo lwe-USU Software accounting system kuyasiza kakhulu, lapho abasebenzi bethu abahamba phambili besiza ukungeza ngokucela kwamakhasimende. Amathuba amaningi ngefomethi efinyelelekayo afaka isandla ekuthuthukiseni ukubalwa kwezimali okusebenzayo kwezinqubo zomsebenzi ngokwethulwa kwemibhalo edingekayo kwisoftware. Ukubalwa kwezimali okukude kwabasebenzi kufanele kwenziwe ngokulawulwa okuphelele kokubalwa kwezimali maqondana nekhwalithi yomsebenzi nesivinini sokwenza ukuhamba komsebenzi. Ukuphendula isisebenzi esikude, indlela elula ukufaka isicelo kusuka kunhlobonhlobo yemisebenzi, amakhono ahlukahlukene adingekayo okufanele asetshenziswe njengoba kuhlosiwe. Oxhumana ngocingo bazishaya indiva kakhulu izincazelo zemisebenzi yabo futhi basebenzisa izinhlelo ezahlukahlukene ezingafanele ngesikhathi samahora ebhizinisi. Kepha uma kunikezwe isimo nobhadane, amabhizinisi amaningi abengenakwenza ngokunye ngaphandle kokushintshela emsebenzini wokude nge-accounting ephelele phezu kohlu lwabasebenzi olukhona manje. Ngokuya ngefomethi ye-accounting ekude, lapho usebenza, imibuzo ehlukahlukene ingavela, lapho udinga ukuxhumana nenkampani yethu ukuthola usizo, lapho ongoti bethu banganikeza khona izeluleko ezifika ngesikhathi. Umsizi obalulekile enqubeni yokwakha amadokhumenti kanye nohlelo lokubalwa kwezimali ngokuqapha angasizwa yinguqulo ekhona yesoftware, esebenza ngokushesha yonke imisebenzi edingekayo yezenzo. Ukubalwa kwemali okukude kwabasebenzi kwakudingeka cishe kuwo wonke amabhizinisi aguqukele ekubalweni kwezimali ezikude ngoba kube nokwehla okuphawulekayo kwamandla okusebenza okudalwe yisimo sengqondo esingalungile sabasebenzi kwimisebenzi yabo eqondile. Imicimbi yangonyaka owedlule ayishiyanga nkampani endaweni ezinzile kepha yaphazamisa isimo sezomnotho samabhizinisi amaningi alahlekelwa, futhi ikakhulukazi, abhidlika. Inqwaba yamakhanda emikhakha eyahlukahlukene yebhizinisi iphendukele enkampanini yethu ukuze icwenge amakhono abo okusebenza, maqondana nohlelo lwe-USU Software system accounting olwenziwe ngcono kakhulu, nokukhula kwesidingo emakethe yokuthengisa nakho sekukhuphukile. Kuphephile ukusho ukuthi wethule umngane othembekile nonokwethenjelwa enkampanini yakho nganoma yimiphi imibuzo nezinqubo zokubalwa kwezimali ngokusebenza kahle okukhulu ngokuya ngesimo sohlelo lwe-USU Software accounting system. Ngosizo lobuchwepheshe besimanje bedijithali, uyakwazi ukulawula ngesikhathi esifanele nangokufanelekile abangaphansi kwakho nabasebenzi abenza ukubalwa kwezimali okukude. Uhlelo luqapha ngokuzenzakalela ukwenziwa kwemisebenzi yabasebenzi kusukela ekuqaleni kosuku lokusebenza ngokufaka inzwa yokuqapha yesikhashana. Imininingwane etholwe ngokushesha idluliselwe ukucutshungulwa nokuqinisekiswa kubaphathi benkampani, kanye nakumnyango wezabasebenzi kanye nowokubalwa kwemali ukuze usetshenziswe ngokulandelayo ngesikhathi sokuholelwa kanye nezinkokhelo ezengeziwe. Ukubikwa kokubalwa kwezimali okukhethwe iklayenti kunganikezwa nganoma iyiphi indlela yokuqhafaza, kungaba ngamashadi, amagrafu, amatafula, ama-histograms. Uma sibheka isimo sakamuva, singasho ngqo ukuthi isidingo sale software sikhule kakhulu, ngaleyo ndlela sinamakhasimende aso ajwayelekile, i-USU Software base ithole ukubuyekezwa okuningi okuhle negama elisungulwe kahle. Ukubhaliswa kwezimali ezikude kwabasebenzi kuyinto ebaluleke kakhulu ekuphathweni, okukwazi ukukhomba abasebenzi abanesimo sokunganaki emisebenzini yabo yomsebenzi bese bevalelisa kubo kwazise umuntu ngeke aguqulwe. Isisekelo Sesoftware yase-USU, selokhu yasungulwa, sidlulise noma yikuphi ukuhlola ukuthi sikwazi ukufakazela ukuphakama kwayo kunenye isoftware ngokuthola, ngezinga elithile noma elinye, ubufakazi beqiniso lamaphutha. Uma siqhathanisa uhlelo lwe-accounting lwe-USU Software system nolunye ulwazi, lapho-ke ungasazisa isikhombimsebenzisi sokusebenza esilula futhi esinembile leso software esinaso, ngokwazi ukufunda ukusebenza wedwa. Inqubo yokulandela umkhondo elula kakhulu ngethemba lokubuka isikrini somsebenzi, enekhono lokuxhuma kwikhompyutha yakhe yomsebenzi futhi athole idatha ngendlela yezifinyezo nganoma yisiphi isikhathi sokusebenza. Ngaphambi kokuba uqale ukubuka abasebenzi, abaqondisi bezinkampani kudingeka bazise abasebenzi ngalesi sikhathi ukuthi bandise umkhiqizo futhi banciphise ukuphumula. Ekuhambeni kokuhamba okuhlukahlukene, ungasebenzisa noma yimaphi amadokhumenti ayinhloko ukutadisha uhlu lwejenali ye-USU Software accounting base. Ngokutholwa kwenqwaba yamandla okulawula angeziwe kanye nokubalwa kwezimali, ngeke uvumele abasebenzi ukuthi bathole amaholo abo ngokushesha, futhi wonke umuntu kufanele, njengakuqala, abe nesikhathi sokwenza imisebenzi yakhe yomsebenzi. Njengoba, ngesikhathi sobunzima, amabhizinisi amancane naphakathi ahlupheke kakhulu, asikho isidingo sokukhuluma ngokuxegiswa kwabasebenzi, abangaqhubeka nokudicilela phansi isimo somnotho esinzima sezinkampani. Abasebenzi basehhovisi kuphela abashintshela kufomethi ekude yokwenza imisebenzi yomsebenzi, futhi abasebenzi bohlobo lokukhiqiza baqhubeka nomsebenzi wabo esitolo, njengakuqala. Kushiwo ngesibindi ukuthi le ndlela yokuphuma isiza isimo esinzima, okumele sisinde ngokulahlekelwa okumbalwa ngangokunokwenzeka emnothweni nakumabhizinisi. Ukuhamba ukude kusiza ukuvumelanisa ukuncintisana kwenkampani nenzuzo ngenkathi kunciphisa izindleko nezindleko ezahlukahlukene. Abasebenzisi bayakwazi ukubala kude nohlu lwabasebenzi ngokufaka imininingwane ekubaleni kweholo, ngokusho kwekhadi lombiko elikhethekile elinamamaki amahora asetshenziwe ngosuku. Uma kukhona inethiwekhi yezinkampani, ibuye ibhekwe kahle, inikeze inani elingenamkhawulo labasebenzi abanekhono lokusebenza kude. Abasebenzi bangasebenzisana ngempumelelo ngaphezulu basebenzise ifomethi ehlukile yamathuba wokubuka imininingwane yomunye nomunye eqediwe kumodi yokubuka. Ungakwazi ukushintsha ngokuzimela izilungiselelo zomlingiswa ngamunye ngenqwaba yemisebenzi yakho ku-database ye-USU Software accounting. Izinkampani zanoma yisiphi isayizi zingathenga uhlelo lwe-USU Software system, olwenzelwe wonke amakhasimende, kungakhathalekile ukuthi kukhiqizwa kangakanani. Ukucushwa okucacile nokulula kwedathabheyisi ye-USU Software accounting kuyinzuzo enkulu yenkampani, maqondana nayo lapho ukwazi khona ukwenza kahle futhi kahle imisebenzi eyabelwe abaphathi benkampani futhi ubathumele ukuyoyiqinisekisa nge-imeyili. Ngokutholwa kohlelo lwesistimu ye-USU Software phakathi nesikhathi esibucayi, kungenzeka ukugcina kahle nangokufanele amarekhodi ezisebenzi kude lapho zisebenza khona.
Uhlelo lokubalwa kwemali luthuthukisa kancane kancane isisekelo senkontileka ngenqubo edingekayo yokugcwalisa izincwadi zokubhekisela. Ngezibopho zesikweletu esivele sikhona, uqala ukukhiqiza amadokhumenti kusisekelo sokusayinwa yizinhlangothi zombili. Usuku lokusebenza lwesisebenzi ngasinye lulandelelwe ngokusobala ngenani lamahora asetshenziswe kusoftware. Noma imiphi imibhalo eyinhloko edingekayo ingatholwa ngokuzenzekelayo ngabaqondisi benkampani, kanye namakhasimende nabahlinzeki.
Izindleko eziningi zentela zakhiwe ngokuphelele ku-database futhi zadluliselwa kusayithi elikhethekile.
Ungashesha ukukhiqiza ukubalwa kokwakhiwa kwamaholo kusoftware ngemininingwane ekhokhiswayo eyengeziwe. Uqala inqubo yokungenisa imininingwane ku-database entsha ukuqala ngokushesha ukusebenza ngolwazi olutholile. Udinga ukwazisa abasebenzi bakho ngenani lomsebenzi owenziwe yibo, ngokubuka abaqaphi babo bonke abasebenzi abakhona. Abasebenzisi bangenza idatha ngezinqubo zebhange maqondana nezinjongo ezingeyona imali ngokushesha nangempumelelo kusoftware.
Ukungena kwemali okukude kwakhiwa ngokuphelele ku-database ngokufakwa kwedatha encwadini yemali yezindleko namarisidi. Ohlelweni, abasebenzisi bangenza i-inventory besebenzisa imishini yanamuhla yokufaka amakhodi. Kuvela kusoftware ukudweba amashejuli ahlukahlukene womsebenzi onganikeza isithombe esiphelele ngokwenzekayo. Imidwebo iletha usesikhathini ekusebenzeni kwabasebenzi ngendlela yokuqhathanisa nangokwezinga lokusebenza kwezifundo ekwenzeni umsebenzi kwisoftware.
Uhlobo lwedemo lesilingo olutholakalayo lohlelo luthinta kahle isifiso seklayenti sokuthenga isisekelo esiyinhloko. Uyakwazi ukufaka uhlelo lweselula emizuzwini embalwa kumakhalekhukhwini, okusiza ukulawula abasebenzi ngenkathi ungaphandle kwehhovisi. Kuvela emnyango wegumbi ukufaka okokusebenza kokuqashelwa kokubukeka, okusiza ukubala idatha yomuntu siqu ngesoftware.
Ukuze uthole isethi esheshayo yemibhalo, kwanele ukusebenzisa ama-ithalikhi enjini yokusesha bese uthayipha idatha ephelele yamagama. Ngaphambi kokuqala umsebenzi kwisoftware, udinga ukubhalisa ngokushesha, okunikeza imininingwane ngokungena ngemvume nephasiwedi yabasebenzi.
Noma iziphi izinkontileka nohlangothi lwezezimali ziboniswa ngokuzenzakalela kusoftware ngenqubo yokuvuselela.
Abasebenzisi bayakwazi ukusebenzisa amatafula ahlukahlukene wokuqondisa ukulawula nokuqondisa inqubo yokubuka. Ngokusebenzisa isici sokuthumela imiyalezo, ungasebenzisa imininingwane yamakhasimende futhi ugcine amarekhodi abasebenzi kude. Ukudayela okuzenzakalelayo okudingekayo kuhlelwe ngendlela yokuthi kwazise egameni lenkampani yomhlinzeki futhi kusebenze imodi eyihlane. Enkambeni yokuphathwa kwemibhalo, unemininingwane edingekayo, oyidlulisa ngendlela yokungenisa endaweni ekhethiwe ephephile. Uhlelo olwenziwa emisebenzini ekude lukhombisa izibalo ngomsebenzi owenziwa ngabasebenzi. Ukuba nesibonisi esilula futhi esilula ku-database, uzokwazi ukukuthola ngokwakho futhi ungabandakanyi ongoti bangaphandle. Ngokwakhiwa kwemibiko ekhethekile ohlelweni, uyakwazi ukulawula amaklayenti angakakuqedi ngokugcwele ukudluliswa kokukude. Unolwazi olulawulwa ngesimo sezinqolobane, inani lokuhamba kwempahla, izimpahla nezinto zokwakha.
Lawula isikhathi somsebenzi
ukubalwa kwezimali nokulawulwa kwabasebenzi
ukubalwa kwezimali nobude besikhathi sokusebenza
accounting emsebenzini akude
ukubalwa kwezimali ngokungabikho emsebenzini
ukubalwa kwabasebenzi emsebenzini
ukubalwa kwamahora asetshenziswe ngabasebenzi
ukubalwa kwezabasebenzi nesikhathi sokusebenza
ukubalwa kwezikhathi zehhovisi
ukubalwa kwezisebenzi ezikude
ukubalwa kwezimali kokusetshenziswa kwesikhathi sokusebenza
ukubalwa kwesikhathi sokusebenza okusebenzayo
ukubalwa kwesikhathi sokusebenza
ukubalwa kwesikhathi sokusebenza emsebenzini okude
ukubalwa kwesikhathi sokusebenza kwesisebenzi
ukubalwa kwesikhathi sokusebenza kwabasebenzi
ukubalwa kwesikhathi sokusebenza kwabasebenzi bebhizinisi
ukubalwa kwesikhathi sokusebenza kwenhlangano
ukubalwa kwesikhathi sokusebenza online
ukubalwa kwesikhathi sokusebenza ebhizinisini
ukubalwa kwesikhathi sokusebenza ngamahora
accounting isikhathi sokusebenza ukude
Uhlelo lwe-accounting lwesikhathi sokusebenza
uhlelo lwe-accounting lwesikhathi sokusebenza somqashwa
ukuhlaziywa kokubalwa kwezimali kwesikhathi sokusebenza
ukuhlaziywa komsebenzi wokude
ukuhlolwa kokulawulwa kokusebenza kwabasebenzi
ukubalwa okuzenzakalelayo kwesikhathi sokusebenza
uhlelo oluzenzakalelayo lokubala umsebenzi
accounting okuzenzakalelayo kwesikhathi sokusebenza
ukuzenzakalela kokulandela isikhathi
i-accounting engenalutho yesikhathi sokusebenza
Ukuhlola umsebenzi okude
Ukulawulwa kokuphathwa kwabasebenzi benhlangano
Lawula ngesikhathi sangempela
Ukulawulwa kokubalwa kwezimali kwesikhathi sokusebenza
Ukulawulwa kwemisebenzi yabasebenzi benhlangano
Ukulawulwa kwemisebenzi yabasebenzi abangaphansi
Ukulawulwa komsebenzi wabasebenzi
Ukulawulwa kwabasebenzi enhlanganweni
Ukulawulwa kwabasebenzi ocingweni
Ukulawulwa kwesikhathi sabasebenzi
Ukulawulwa komsebenzi wabantu
Ukulawulwa kwabasebenzi ebhizinisini
Ukulawulwa kwezisebenzi ezikude
Ukulawulwa komsebenzi okude wabasebenzi
Ukulawulwa kokusetshenziswa kwesikhathi sokusebenza
Ukulawulwa kwemodi yesikhathi sokusebenza
Ukulawulwa kwesikhathi sokusebenza kwabasebenzi
Ukulawulwa kwabenzi bomsebenzi
Lawula emsebenzini wokude
Lawula imisebenzi yabasebenzi
Ukulawulwa komsebenzi wezikhulu
Ukulawula umsebenzi womnyango
Izinhlelo zokulawula imisebenzi yabasebenzi
Uhlelo lokulawula isikhathi sokusebenza
Uhlelo lokulawula lomsebenzi wabasebenzi
Ukulawulwa kwamanje kwabasebenzi
Database for accounting accounting
Idatha emayelana nomsebenzi wesilawuli kude
Ukubalwa kwebanga lesikhathi
Landa uhlelo lwesikhathi sokusebenza
Landa uhlelo lwe-accounting lwesikhathi sokusebenza
Landa isoftware yokubalwa kwamahhala kwesikhathi sokusebenza
Ukulawulwa okusebenzayo kwabasebenzi
Ukulawulwa kahle kwabasebenzi
Uhlelo lokulandelela abasebenzi kukhompyutha
Uhlelo lokulawulwa kwabasebenzi
Ukuhlolwa komsebenzi okude
Izici ze-accounting zesikhathi sokusebenza
Ukubalwa kwamahhala kwamahora okusebenza
Ukubalwa kwezimali okujwayelekile kwesikhathi sokusebenza
Amahora we-accounting wesikhathi sokusebenza
Ungalandelela kanjani amahora wokusebenza
Ungahlela kanjani umsebenzi wokude
Ungahlela kanjani umsebenzi okude
Ungasidlulisela kanjani isisebenzi siye kude
Ukubalwa kwezimali komuntu ngamunye kwesikhathi sokusebenza
Ukubalwa kwemali okungabizi kwesikhathi sokusebenza
Imininingwane mayelana nomsebenzi okude
Imininingwane ngomsebenzi wokude
Faka uhlelo lokulawulwa kwabasebenzi
Ukulawulwa kwangaphakathi kwabasebenzi
Ukugcina irekhodi lomsebenzi elijwayelekile
Ukugcina amarekhodi esikhathi sokusebenza somqashwa
Gcina umbhalo walokho abasebenzi
I-Logbook yokubalwa kwesikhathi somsebenzi
Ukuphathwa komsebenzi okude
Ukuphathwa kwesikhathi sokusebenza
Uhlelo lokuphatha lomsebenzi okude
Izindlela zokubalwa kwemali zesikhathi sokusebenza
Imodi yokusebenza nokubalwa kwemali kwesikhathi sokusebenza
Ukulawulwa kokusebenza kwabasebenzi
Ukusebenziseka kwesikhathi sokusebenza
Ukuhleleka nokulawulwa komsebenzi wabasebenzi
Ukuhleleka nokulawulwa komsebenzi kwabasebenzi
Inhlangano ye-accounting yamahora okusebenza
Inhlangano yohlelo lokulawulwa kwabasebenzi
Inhlangano yokulawula umsebenzi wochwepheshe
Ukuhlelwa komsebenzi okude
Inhlangano yomsebenzi wokude
Inhlangano yomsebenzi wokude webhizinisi
Inhlangano yomsebenzi wokude wabasebenzi
Inhlangano yokubalwa kwezimali zomsebenzi
Ukuhlelwa komsebenzi kude
Inhlangano yomsebenzi kwimodi yesilawuli kude
Ukuhlelwa komsebenzi wesisebenzi esikude
Inhlangano yomsebenzi yokubalwa kwabasebenzi
Ubuchwepheshe bokulawula abasebenzi
Uhlelo lwe-accounting lwesikhathi sakho
Uhlelo lokubala isikhathi
Uhlelo lwezimali zesikhathi sokusebenza mahhala
Uhlelo lokulandela ngomkhondo umsebenzi
Uhlelo lokulandela isikhathi
Uhlelo lokuhlelwa komsebenzi
Umbiko wenqubekela phambili ngomsebenzi wokude
Ukunikeza umsebenzi wokude
Ukubhaliswa kwamahora okusebenza
Ukuphathwa okukude komsebenzi
Umbiko womsebenzi okude
Bika ngabasebenzi abasebenza kude
Ukusetha ukubalwa kwezimali kwesikhathi sokusebenza
Ukubalwa okulula kwesikhathi sokusebenza
Gada umsebenzi wabasebenzi
Uhlelo lokubalwa kwesikhathi
Uhlelo lokulawulwa nokuphathwa kwabasebenzi
Uhlelo lokulawulwa kwabasebenzi bebhizinisi
Uhlelo lokusebenza accounting
Ukubalwa kwesikhathi kwabasebenzi
Imodyuli yokubakhona kwesikhathi
Ukuphathwa kwesikhathi nokuhlelwa kwesikhathi sokusebenza
Ukulandelwa kwesikhathi kwabasebenzi
Uhlelo lokulandela isikhathi lwabasebenzi
Abasebenzi besistimu yokulandelela isikhathi
Ukulandelela ngomsebenzi wokude
Ukudluliswa kwenkampani iye emsebenzini okude
Ukudluliselwa kwenhlangano emsebenzini okude
Ukudluliselwa kwabasebenzi emsebenzini okude
Dlulisela kumodi yesilawuli kude yokusebenza
Ukushintshwa kwabasebenzi baye emsebenzini okude
Ukushintshela emsebenzini okude
Ukusebenza uhlelo lokuphathwa kwesikhathi
Ukubalwa komsebenzi kwabasebenzi
Ukulawulwa komsebenzi kwabangaphansi
Umsebenzi wenkampani ku-telework
Umsebenzi wabasebenzi ku-telework
Ukubalwa kokusebenza komsebenzi
Ukubalwa kokusebenza komsebenzi ngabasebenzi
Ukulandelela isikhathi somsebenzi